Ideaz unlimited: Indlela yokuthola imali ku-intanethi? Indlela yokuceba? Angikwazi ukubhala isihloko, ngingaba kanjani i-blogger?
Indlela yokuthola imali ku-intanethi? Indlela yokuceba? Angikwazi ukubhala isihloko, ngingaba kanjani i-blogger?
(ZULU)Indlela yokuthola imali ku-intanethi? Indlela yokuceba? Angikwazi ukubhala isihloko, ngingaba kanjani i-blogger? Angazi i-ABCD yekhompuyutha, Angazi isiNgisi esifanele, futhi ngingakwazi yini ukuthola imali nge-blogger? Thola izimpendulo kuzo zonke le mibuzo, manje!
Ingabe kuyiqiniso, abantu bathola imali nge-Google?
Indlela yokuthola imali ku-intanethi?
Ngingayithola imali inthanethi?
Angikwazi ukubhala, ngingaba kanjani i-blogger?
Angazi i-ABCD yekhompuyutha, Angazi isiNgisi esifanele, ngisakwazi yini ukuthola imali nge-blogger?Indlela yokuthola imali kusuka ku-Youtube?Ingabe le mali iphephile?Manje, thola izimpendulo kuyo yonke le mibuzo!
Ingabe kuyiqiniso, abantu bathola imali nge-Google?Yebo, noma ubani angathola imali kusuka kubhulogi ehlukahlukene. Emazweni amaningi athuthukile Ukubhuloza ubuchwepheshe besikhathi esigcwele.
Angazi i-ABCD yekhompuyutha, Angazi isiNgisi esifanele, ngisakwazi yini ukuthola imali nge-blogger?
Asikho isidingo sokuqonda ikhompyutha. Asikho isidingo sokuqonda isiNgisi esiphezulu segrama. Ngiye ngaqeqesha abantu abahlulekayo ngokwezinga eliyisithupha (manje baneminyaka engama-40) bathola inani eliphakeme. Ngifunde intombazane eyishumi nesishiyagalolunye efundile, ngathola okungaphezu kukayise webhizinisi.Angikwazi ukubhala, ngingaba kanjani i-blogger?Ngokumangazayo, akudingeki ukuba ube umbhali, ukuze uthole imali kusuka kubhulogi. Kumelwe uqeqeshe kahle. Lapho ngivakashela inkulumo ekolishi yeComputer Engineering, ngisho neF.D. uthisha uyakwazi ukuthola imali ebhulogi. Bese bekhala phambi kwami, ngamagama, Nkosi, lokhu kuyilwazi langempela. Noma yini esiyifundayo akuyona impilo nemali ehlelwe ...
Uma ufunde ikhompyutha futhi uchitha isikhathi wenza umsebenzi, woza kimi. Ngizokufundisa ukuthi ungathola kanjani amadola ama-500 kuya ku-1000 ngenyanga. (35,000 kuya ku-70,000)
Kudinga izinyathelo ezihlelekile zokulandela. Eziningi izikhathi lapho abafundi befunda, bangibuza, "mnumzane, konke ku-Google, ngalokho lokho owasifundisayo?"
Ngangivame ukuphendula, "Amapharele avela ku-Ocean. Kodwa ochwepheshe bangakufundisa ukuthi ungadlulela kuphi nokuthi ungayithola kanjani, ngaphandle kwalokho kufanele uchithe impilo yakho engayitholi lutho."
Futhi kukhona abambalwa kakhulu ochwepheshe, njengami, ukufundisa abafundi ukuze baphumelele.
Indlela yokuthola imali ku-intanethi? Kuthiwani uma ngingenzi imali?
Ngiphinde nginikeze isiqinisekiso semali. Uma ulandela imiyalelo yami futhi ungenakukwazi ukuthola imali, zingakapheli izinyanga eziyisithupha ubuyiselwe imali yakho.
Ngami kwakungekho oqeqeshayo, ngifunde ngokuhlangenwe nakho kwami. Ngakho-ke manje ngingasho ukuthi, "Yebo, ngisho nomuntu ongafundela ikhompyutha angathola imali, uma ngihola"
Ngiphatha kokubili amakilasi, umuntu siqu kanye ne-virtual. Isilasi esivamile sisho ukuthi bangafunda emakamelweni abo okulala. Ngibafundisa ngokuthi "Whatsapp" ikholi yevidiyo futhi "umbukeli weqembu"Uma uhlala emzaneni noma e-U.S.A. Ungafunda.
Izikhathi eziningi kubonakala phakathi kwengu-40 umfazi wendlu unesikhathi esiningi samahhala. Manje izingane zikhulile, umyeni usematasa kakhulu, indlu igcwalisiwe, imisebenzi yomphakathi iyabonakala. Manje ufuna ukukhombisa ithalenta lakhe, ufuna ukuzithola futhi. Akukhona kuphela ngemali. Kungenxa yokufunda okuthile okusha ukwamukela nokuyala ubuchwepheshe obusha.
Izimali zami zingama-24 500 = 00 INR kulabo abaneminyaka engu-12 kuya kweyengu-25 ubudala,19,000 = 00 INR kulabo abaneminyaka yobudala engama-25 kuya ku-45,17,000 = 00 INR kulabo abaneminyaka engu-45 + kuze kube ngu-85 yobudala,Noma yimuphi intombazane nentombazane esekhulile (owesifazane) 9,500 = 00 INR
Abantu bangibuza ukuthi kungani uhlaka lwakho lwezindleko lufana nalokhu?
Indoda eneminyaka engu-50, noma owesifazane oneminyaka engama-40 unesithakazelo kuphela ekutholeni imali. Nakuba abafundi banemibuzo eminingi yobuchwepheshe ..
Isexwayiso:Ungafaki phakathi kwezinkampani ze-MLM ezicela ukuchofoza kuzikhangiso, futhi uthembisa ukukhokha. Lokho kubhizinisi elingekho emthethweni le-MLM
Ibhizinisi le-Multi Level Marketing (MLM) alikho emthethweni eNdiya njengenqubomgomo ye-RBI neNew central central, ngemuva kokuthi "ukukhishwa kwemali".
Kunamavidiyo amaningi we-Youtube, we-MLM yemisebenzi eminingi. Ungabanjwa lapho.Ngingumqeqeshi oqinisekisiwe we-Google. Ubani oshiye u-Practice njengoDokotela. (Psychiatry), futhi manje ngiyilungu le-blogger eligcwele, onenesikhathi esiningi samahhala ngakho ngiyakujabulela ukufundisa.
Xhumana nami ku-ishwarbhaijoshi23@gmail.com
Kuzokwenzekani uma ngishiya ibhizinisi lami futhi nginakekele ngokugcwele ku-Blogging? I-Vlogging?
Yebo, ungakwazi ukwamukela ukubhaliswa njengebhizinisi eligcwele. Ikwazi ukuzuza ngaphezulu kuka-40 lakh ngenyanga.
Ebhizinisini yendabuko kufanele ushayele okungenani 30 lakh ukuze wenze inzuzo ye-1 lakh. Awukho utshalomali omkhulu.
Awukho umncintiswano njengobhizinisi bendabuko. Nangu kuphela umsebenzi wengqondo, akukho msebenzi wesandla.
Ungakwazi ukuyeka umsebenzi futhi ngoba uqinisekisiwe u-100%, ukuthola okungenani ama-30 kuya ku-40,000 ngenyanga.
Muva nje ngimemezele iwebhusayithi ye-thirdly ngobukhulu e-India sicela uvakashele. Futhi memezela imisebenzi yakho lapha mahhala.
Labels: Indlela yokuthola imali ku-intanethi? Indlela yokuceba? Angikwazi ukubhala isihloko, ngingaba kanjani i-blogger?